Maxkamad ku taala India oo maalintii labaad dhageysaneysa dacwad loo heysto dhalinyaro Soomaali ah – Radio Muqdisho
Maxkamad ku taala India oo maalintii labaad dhageysaneysa dacwad loo heysto dhalinyaro Soomaali ah
Maxkamad ku taala dalka India ayaa maalintii labaad u fadhida dhageysiga dawcad loo heysto dhallinyaro Soomaaliyeed oo lagu edeeyay burcad badeednimo.
Dhallinyaradaasi ayaa ku gacanseyrtay eedeeymaha loo soo jeediyay ee ah burcadbadeednimo, waxeeyna taa bedelkeeda ku doodayaan iney ahaayeen kaluumeysato.
Mas’uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee dalkaasi India ayaa dadaal balaaran ugu jira sidii loo furdaamin lahaa dhallinyaradaasi maxkamadeyntoodu ka socoto dalkaasi India.
Ciidamada India ayaa la sheegay in ay dhalinyaradaasi ka qabteen meel ka baxsan xadka badda Soomaaliya, waxaana la tilmaamay in laba ka mid ah dhalinyaradaasi ay geeriyoodeen muddadii ay xabsiga ku jireen.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay iney dowladda India kala xaajoondoonto sidii dhalinyaradani ay xukunkooda ugu dhameysan lahaayeen dalkeenna Soomaaliya.
Barnaamijka kulanka todobaadka oo looga hadlay dhameystirka Federaalka+Dhageyso